Bụrụ onye na-ere ahịa - Jinhua Ecubmaker Technology Co., Ltd.
Site na mmepe nke teknụzụ obibi akwụkwọ 3D, ngwa nbipute 3D na-ewu ewu na ndụ ndị mmadụ kwa ụbọchị. Ọ dị ka ọ bụ nnukwu ohere iji kpata ego ma wuo ọrụ gị n'ụwa ọhụrụ. Bụ otu n'ime ndị mbụ emeputa na 3D obibi akwụkwọ Market, anyị nwere ahụmahụ na nnyocha, mmepe na ahịa. Iji kwado ndị mmadụ ka ha nwee obi ụtọ nke ndị na-ebi akwụkwọ 3D, ma mee ka ọ dịkwuo mfe maka ndị EcubMaker 3D Fans anyị iji ndị na-ebi akwụkwọ, EcubMaker na-achọ ndị na-ere ahịa, ndị nkesa na ndị na-ere ahịa n'ụwa niile! Ebe ọ bụ na, ndị ahịa anyị na-ekpuchi ọrụ na ọrụ niile, dị ka ndị na-ere ahịa ahịa, ndị na-ere ahịa, ndị na-akụzi akwụkwọ, wdg. Enweghị ihe o nwere inwe ọchịchọ ịmalite azụmaahịa nke gị, ma ọ bụ na ị nwere ezi echiche ndị ọzọ gbasara onye nbipute 3D. Ọ bụrụ n’echiche na ị nwere ahụmịhe ịgba ọsọ maka akara aka gị. OEM ọrụ dị. A nabatara gị isonyere anyị ugbu a. Dị ka ndị na-eduga nnyocha na imewe ụlọ ọrụ nke 3d ebi akwụkwọ, anyị na-ewere àgwà a mkpa, na-elekwasị anya na-eme ihe kasị mma na ngwa nbipute na elu arụmọrụ, na àjà kasị mma ọrụ maka onye ọ bụla. A nabatara gị niile na ịre ngwaahịa anyị. Ihe mgbaru ọsọ anyị bụ ịhapụ ka ntụkwasị obi gị baa ọgaranya. Anyị chọrọ inweta mmeri mmeri ma wulite mmekọrịta dị ogologo oge.
1. Brand Uru:
EcubMaker 3D Technology, nke hibere na 2013, bụ ọkachamara na ijikọ nyocha 3d nyocha, imewe, na azụmaahịa dum. Na mgbakwunye, vidio nyocha EcubMaker na-ebi akwụkwọ ahụla ọtụtụ narị puku echiche na YouTube. Ọtụtụ ebe nrụọrụ weebụ 3D na-ebi akwụkwọ ọkachamara enyochawo ndị na-ebi akwụkwọ anyị nke ukwuu, mee ka anyị bụrụ ndị kachasị mma uru dị ole na ole, dị ka Gadget Flow, Roboturka, 3Dpc.com na na.
2. Teknụzụ na Nkwado Ọrụ
EcubMaker R & D otu nke ndị injinia nwere nkà nwere ọrụ miri emi dị omimi na mbipụta 3D edepụtara iji nye teknụzụ ọkachamara. Ka ọ dị ugbu a, ọrụ kachasị mma-ire ere bụkwa nke ndị ọkachamara EcubMaker 3D nyere. Anyị nwere onwe anyị na-elu-edu mgbe-ere ọrụ otu egwuregwu, na-agbaso echiche nke "Ahịa Okwu" na a etozu ọrụ usoro nke elu arụmọrụ, mma, na nghọta. Ya mere, dị nnọọ ka anyị nwere aha dị elu na anyị Mgbe ire ere nkwado n'ihi nzaghachi ngwa ngwa ha na mmekọrịta enyi na enyi.
3. Akwadoro Ogo
Ngwaahịa anyị niile agafewo ọtụtụ asambodo mba ụwa na asambodo gburugburu ebe obibi dịka FDA, CE, FCC, na ROHS, wdg. Anyị etinyela ihe mgbaru ọsọ atọ n'ime ụlọ ọrụ ahụ. All akụkụ a nwalere ọtụtụ oge tupu ya juru n'ọnụ na anyị nwere ahụmahụ njikwa otu gafere ogologo oge ule ọ bụla na ngwa nbipute iji hụ na set elu ka ụgbọ mmiri. Iji ruo na nke ikpeazụ nkwakọ ngalaba ọ bụla ngwa nbipute gafere ọ bụla àgwà akara ule ma anyị na-eziga ya maka remanufacturing ngalaba. Igbe ahụ jupụtara na Styrofoam dị elu iji chebe onye nbipute site na nchụpụ dị elu ma ọ ghaghị ịgafe ule ntachi obi tupu ị kwadebe maka mbupu ahụ. Yabụ na onye ọ bụla nwere ike izu ike mesie ya ike na onye nbipute ahụ ga-eru ebe ahụ na-enweghị ụgbọ mmiri mebiri emebi.
4. Ọnụ Ahịa
Anyị kwenyere na ndị na-ebi akwụkwọ anyị bụ maka ụdị mmadụ niile. Anyị anaghị eche maka otu ụdị ndị ahịa. Yabụ chee maka ọnụego ahụ dịka uru pere mpe ma nye ọrụ kacha mma maka ngalaba niile. Anyị na ngwaahịa price bụ ụzọ dị ọnụ ala karịa ugbu a, otu udi ngwa nbipute gburugburu. Ebe ọ bụ na anyị na-achọ azụmahịa ogologo oge, anyị chọrọ inweta ntụkwasị obi ọ bụghị naanị iche maka uru. Ihe EcubMaker tụrụ anya bụ ịkwado onye ọ bụla ịmara banyere teknụzụ obibi akwụkwọ 3D ma nwee ọ funụ na-atọ ụtọ ime ka nrọ ha bụrụ eziokwu. Egbula kpọtụrụ anyị maka ọnụ ahịa ego ma ọ bụrụ na ịzụ ihe dị mkpa. Site na ịzụrụ ọtụtụ uru yana njikwa ngwa ahịa dị elu, EcubMaker na-ebelata ọnụahịa nke ngwaahịa iji hụ uru nke ndị na-ere ahịa, iji nyere ndị ọrụ njedebe aka ịchekwa ego.
Kedu ihe anyị ga-atụ anya n'aka gị?
• Nwee nghọta ka mma banyere ngwa nbipute ịchọrọ.
• Gwa anyị gbasara atụmatụ azụmahịa gị na ụlọ ọrụ gị.
• Na-akwado anyị maka ọnụahịa ahụ. Dị ka anyị na-enye gị kacha nwee ọnụ ahịa gị.
• Akwalite anyị ika na 3D ebi akwụkwọ omenala ifịk ifịk.
• Ọ bụrụ na ị nwere mmasị ịwụfu, anyị ji ezi obi na-akwado gị.
Dee ebe a: Sales01@zd3dp.com
Kpọtụrụ anyị n'agbanyeghị na email a. Nwere ike ịgwa anyị gbasara gị na otu anyị nwere ike isi zụlite mmekọrịta azụmahịa ogologo oge. Anyị na-atụ anya email gị. Ga-enweta azịza ozigbo anyị natara ya. Daalụ nke ukwuu maka oge gị.